Izindaba - Umehluko phakathi kwemoto yokudlidliza nemoto ejwayelekile
Imoto yokudlidliza ifakwe isethi yamabhulokhi e-eccentric eguquguqukayo kuzo zombili iziphetho ze-rotor shaft, futhi amandla okuthakazelisa atholakala ngamandla we-centrifugal akhiqizwa ukujikeleza kwejubane elikhulu le-shaft nebhulokhi eccentric. Ibanga lokuvama kwemoto yokudlidliza inkulu, futhi umsindo womshini ungancishiswa kuphela lapho amandla okuzijabulisa namandla ehambelana kahle. Kunezigaba eziyisithupha zama-vibration motors ngokuya ngemodi yokuqala nokusebenza kanye nejubane lokusebenza.
Imoto ejwayelekile eyaziwa njenge "motor" ibhekisa kudivayisi ye-electromagnetic eqonda ukuguqulwa noma ukudluliswa kwamandla kagesi ngokomthetho wokungeniswa kwe-electromagnetic. Imoto imelwe uhlamvu M esifundeni (indinganiso endala ngu-D). Umsebenzi wawo omkhulu ukukhiqiza i-torque yokushayela. Njengomthombo wamandla wezinto ezisebenza ngogesi noma imishini eyahlukahlukene, i-generator imelwe uhlamvu G kwisekethe. Umsebenzi wawo omkhulu Indima ukuguqula amandla kagesi abe ngamandla kagesi.
Uyini umehluko phakathi kwemoto yokudlidliza nemoto ejwayelekile?
Isakhiwo sangaphakathi semoto yokudlidliza siyefana nesemoto ejwayelekile. Umehluko omkhulu ukuthi imoto yokudlidliza ifakwe isethi yamabhulokhi e-eccentric angaguquguqukayo kuzo zombili iziphetho zeshaft rotor, futhi amandla entshisekelo atholakala ngamandla we-centrifugal akhiqizwa ukujikeleza kwejubane elikhulu le-shaft nebhulokhi eccentric. Ama-vibration motors adinga ukwethembeka okuthembekile kwamandla okulwa nokudlidliza ezicini zemishini nezikagesi kunama-motor ajwayelekile. I-rotor shaft yemoto yokudlidliza yezinga lamandla elifanayo ishubile kakhulu kunaleyo yemoto ejwayelekile esezingeni elifanayo.
Eqinisweni, lapho kukhiqizwa imoto yokudlidliza, imvume efanayo phakathi kwe-shaft ne-bearing ihlukile kuleyo yemoto ejwayelekile. I-shaft nokuthwala imoto ejwayelekile kufanele kufaniswe eduze, futhi imvume efanayo phakathi kwe-shaft ne-bearing kumoto yokudlidliza ukulingana okushelelayo. Kukhona igebe lika-0.01-0.015mm. Vele, uzozwa ukuthi i-shaft izohamba ngakwesokunxele nangakwesokudla ngesikhathi sokulungiswa. Eqinisweni, lokhu kulungiswa kwemvume kunendima ebalulekile.